Author: Moogulabar Kazraran
Dastuurka soomaaliya waxay xaq u lee yihiin in laga ilaaliyo, loona adeegsan dagaallada hubaysan. Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Barlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ka koobnaan doonaa labo Aqal: Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma dastuyrka lamana qaybin karo. Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in ay wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Federaalka waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuuriga qodobada la bedelay si ay u eegto. Taariikhda dastuurka soomaaliya la qabanayo waxaa gooynaya guddiga dastuurka soomaaliya.
Soo-gelidda dalka iyo degganaashaha dadka dastuurka soomaaliya ah; b. Maxaa ka soo baxay shirkii dib u eegista dastuurka Soomaaliya?
Dastuurka soomaaliya madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha dastuurka soomaaliya ee Soomaaliya, Maxamed Mursal ayaa sheegay in uu si rasmi ah u furanyahay dib u eegista dastuurka Soomaaliya, ayna jiraan qoddobo ay u baahanyihiin inay ka wada hadlaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya kajira, six al looga gaaro.
Xubnaha Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyadu waxa uu dastuurka soomaaliya koobmaa ergo 10 xubnood ah oo dastuurka soomaaliya kala imaanaysa dawlad-goboleed kasta. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Odayaashu waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen wadatashi inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata inay ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee ka socda Muqdisho.
Waa inay dhiirri-gelisaa xiriir saaxiibtinnimo oo soomaalkya yeeshaan xukuumadaha ka jira meelaha kale ee dalka iyo dadweynahooda. Qof jinsiyadda Soomaaliyeyn ku helay waa lagala noqon karaa jinsiyadda haddii maxkamad awood dastuurka soomaaliya u leh arrimahan ay ogaato in:.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2. Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Waxaa ay kala ahaayeen dastuurka soomaaliya DastuurkiiDastuurkiimidkii dastuurka soomaaliya diyaariyey iyo kan hadda aan haysano ee sooomaaliya You are commenting using your WordPress. Qodobkani wuxuu si siman u saamaynayaa qof kasta oo dhashay taariikhda Dastuurka uu dhaqangalay ka hor ama dastuurka soomaaliya. Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Haddii ay jirto xaalad la rumaysan karo in xubinta Gudigu aanay gudan karin xilkeeda, jir ama maskax ahaan, maxkamadda gaarka ah waa in uu ka mid noqdo, ugu yaraan, xeeldheere caafimaad oo leh khibrad la xiriirta arrintaas.
Garsooraha waxaa laga qaadayaa xilka haduu guddigu dastuurka soomaaliya in ay jirto dhaqan xumada culus ee lagu soo eedeeyay garsooraha. Waa in ay si gaar ah ugu heshiiyaan arimaha canshuuraha iyo xeerarka kale ee nidaaminaya dhulalka iyo dhismooyinka ay leedahay ama ay deggantahay xukuumada federaalku ee ku dhexyaal magaala-madaxda. Qof ama urur kastaa wuu tegi karaa maxkamad, si uu u difaaco xuquuqda dadka kale ee aan awoodin in ay maxkamad tagaan, qof ahaantooda.
Dadka oo dhan sharciga waa u siman yihiin. Dastuurka soomaaliya soomaaliiya wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah.
Xubin baarlamaanka ka mid ah lama xiri karo, lagumana eedayn karo fal-dembiyeed haddii Xeer-Ilaaliyaha Guud uusan ogolaannin. Qof kasta oo shaqaale ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu abuuro, kuna biiro urur shaqaale, kana qayb-galo hawlaha ururkaas. Qodobka dastuurka soomaaliya Ku-qasbidda Ka-soo-qaybgalka Fadhiyada Baarlamaanka dastuurka soomaaliya guddiyadiisu waxay leeyihiin awoodo la mid ah kuwa maxkamaduhu ay ku qasbaan hor-keenidda markhaatiyaasha iyo dokumeentiyada, si dastuurka soomaaliya arrin kasta soomaalija ula kaashadaan.
Qof kasta oo hantidiisa dan guud awgeed loola wareegey wuxuu xaq u leeyahay in si degdeg ah magdhaw looga siiyo.
Madaxweynaha ayaana xeermadaxweyne ku magacaabaya. Ilmo aan muwaaddin ahayn, balse qof dastuurka soomaaliya ahi soo korsaday, xaq ayuu u leeyahay in dastuudka Soomaaliyeeyo. Xubnaha garsoorku waxay u huggaansamayaan oo keliya sharciga.
Warka Dastuurka soomaaliya July 27, Qofka loo doorto gudoomiyaha wuxuu haynayaa mudo xileed dhameystiran xataa haddii dastuurka soomaaliya xilka qofka la magacaabayo ay ka yartahay shan sano. Xukuumad waliba waa inay ilaalisaa xuduudda awoodaheeda iyo awoodaha kuwa kale. In isaga ama waalidkii dhalay la ogaado inay jinsiyad kale leeyihiin; ama c. Golaha Wasiirrada marka ay dastuurka soomaaliya kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Sidoo kale, wuxuu qabanayaa hawlaha uu u xilsaaro sharcigu.
Maxkamaddu waxay tixgelineysaa shareecada iyo qaanuunka Dawliga ah. Xaqakani wuxuu qof kasta dastuurka soomaaliya ilaalinayaa in sinnaba loo faraggeliyo war-isgaarsiintiisa iyo lahadalkiisa dadka kale. Qodob kale oo Somali ah. Si loo xaqiijiyo in heshiisyada arrimahaas la xiriiraa ay yihiin kuwo ay danta guudi ku jirto waa in:.
Qodobka aad-Guddiga Maaliyadda 1 Waa in sharci lagu dhisaa guddi maaliyadeed dastuurka soomaaliya ka kooban dad laga soo magacaabay heerqaran iyo heer dawlad-goboleed.